ပင်စင်စားများအတွက် e-Pension စနစ်ဆောင်ရွက် ~ Myanmar Express
ပင်စင်စားများအတွက် e-Pension စနစ်ဆောင်ရွက်
From : ထူးအောင် အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၃ (၁၅ - ၂၁ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၂) အစိုးရ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ ပင်စင် လစာငွေများကို e-Pension စနစ်ဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာ့စီးပွား ရေးဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ "အခုလောလောဆယ် Data ကောက်တဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ စမ်းသပ်ကာလကို မရောက်သေးပါဘူး" ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ပင်စင်လစာ ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို e-Pension စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်သွားရန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြော ကြားသည်။ ဘဏ်ခွဲများတွင်လာရောက်ထုတ်ယူသည့် ပင်စင်စားများအား စာဖြင့်ဆက် သွယ်ပြီးအကြောင်းကြားခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း အချက်အလက် ကောက်ယူရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ "ဘဏ်ကို လာထုတ်တဲ့ ပင်စင်စားတွေကို စာနဲ့ လှမ်းအကြောင်းကြားပါတယ်။ ဘဏ်ကို လာမထုတ်နိုင်တဲ့ ပင်စင်စားတွေကို အရင် ကတည်းက အရာရှိ တွေက အိမ်တိုင်ရာရောက် ပင်စင် သွားရောက်ပို့ပေးရင်းနဲ့ အကြောင်းကြားပါတယ်" ဟု မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ တစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူက မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောသည်။ e-Pension စနစ်အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် ပင်စင်စားများအနေ ဖြင့် ပင်စင်စားများကိုယ်တိုင် လွန်ခဲ့သည့် ခြောက်လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် လိုင်စင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်း နှင့် ပင်စင်စာအုပ်တို့နှင့်အတူ ပင်စင်စား ကိုယ်တိုင် လက်ဗွေနှိပ်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပင်စင်စားဦးရေ ရှစ်သိန်းခန့်ရှိကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေး ပင်စင်စား သုံးသိန်းခန့်ရှိပြီး ဦးစီးဌာန ပင်စင်စား သုံးသိန်း ၀န်းကျင်နှင့် လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းပင်စင်စား နှစ်သိန်းခန့် ရှိကြောင်း ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန် ချက်များအရ သိရသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် အစိုးရသစ်မှ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို လွှဲပြောင်း ရယူပြီးနောက် အငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်လစာများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လက တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ Myanmar Express
မလေးရှားမှ မြန်မာ ငါးဦး သေဆုံးမှု ဘာတစ်ခွန်းမှ မပြောပဲ ခိုးဝင် ဘင်္ဂလီကို ဖမ်းဆီးသဖြင့် ဥရောပ ပါလီမန်က မြန်မာကိုရှုတ်ချ
ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဆိုင်ရာ သြဝါဒခံယူပွဲနှင့် အကြိုညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကြီးကြေညာချက်
ကျော်ကိုကို ဟက်ထရစ် ဂိုးနှင့်အတူ အဖွင့်ပွဲတွင် ဂို...
စစ်တွေတွင် ၃ ရက်မြောက် မီးရှို့မှု ဖြစ်ပွား
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အိမ်တွေကို မီးရှို့ခံရလို့ ရွှေတိဂုံမှ ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး ဘူ...
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ြ...
သေသူကို သရဏဂုံတင်ခြင်း ပြဿနာ
ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း များအတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများရောက်ရှ...
နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ၌ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်ပြ...
မောင်တောမြို့ နယ်အတွင်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှ ဒေသခံ...
စစ်တွေမြို့ နယ်မြေခံဆေးတပ်ရင်းမှ ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့...
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်လေယဉ် ပစ်ချခံရခြင်းဖြစ်၊...
ယခုလအတွင်း Debit Card များ စတင်သုံးစွဲနိုင်ရန်စီစဥ...
အကြိမ်ရေအကန့်အသတ်မရှိ ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်မည့် Reloa...
အနောက်နိုင်ငံများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်တန်းရောက...
အတိုက်အခံမီဒီယာများကို ၁၀၁ ကြိမ်မြောက် စိတ်ပျက်ခြင...
ဤ သို့သော ၀ါဒ ဖြန့်မှုကြောင့် မြန်မာအမျိးကောင်းသမီး...
ရခိုင်ပြည်နယ်က အရေးအခင်းမှာတော့ ပြည်ပမီဒီယာတွေကလွဲ...
အသတ်ခံရသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၁၀ဦး အလောင်း ပြန်ရ...
မာတုကာမ က ထိပ်မှာထိုင်၊ ဘုန်းကြီးက ဘေးနားကပ်ထိုင် ...
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက် ၍ သံဃာ့ဆန္ဒကို ကြေငြ...
ဦးရဲထွဋ် မှ DVB သို့ ဖြေကြားခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေခရိုင်နှင့် မောင်တော ခရိုင်အတွ...
ရခိုင် ၁၀ ဦးအား သတ်သူ ဘင်္ဂါလီ ၂၂ ဦး ကို လူသတ်မှုဖြင့...
ရသေ့တောင်မြို့နယ် အနောက်ပြင်ကျေးရွာ ရွာအစွန်အိမ်မျ...
တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ လိုင်စင်မဲ့ စားသုံးဆီများ အများပြည...
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး W...
ဗဟန်းမြို့နယ် ယုဇနဟိုတယ်၌ နိုင်ငံခြားသား အမျိုးသမီ...
လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမှု ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်း သမ္မတညွှန်ကြ...
စစ်တွေတက္ကသိုလ်ဟောင်း အနီး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ပိုက်ဆံမက်ရွှေမြန်မာ မမများ၊ညီမများ ဒါလေးကိုတော့ဖတ်...
တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်
ရသေ့တောင်တွင်ဘင်္ဂလီကုလား ရိုဟင်ဂျာတွေ ယုတ်မာကြပြန်ြ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ မသကာင်္သူ မူဆလင် ၇ ဦ...
CDMA 800 MHz ဖုန်းများ အတွက် အင်တာနက် EVDO စနစ် ပါ...
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့နယ် ၃ မြို့နယ်ကို လျှပ်စစ် ဓာ...
တစ်ရက်ကို ၂၀၀ ကျပ်နဲ့ အင်တာနက် သုံးစွဲနိုင်မယ့် Mo...
ဖုန်းပွားနိုင်သော CDMA ဟန်းဆက်အသစ်တမျိုးဝင်ရောက်လာ...
ရိုဟင်ဂျာ မဟုတ်-ဘင်ဂါလီ .......... ဘားမား မဟုတ်-မြ...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် Border Guard Forces ဖွဲ့ စည်းေ...
မြန်မာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ ထိန်းသိမ်းအပ်သောကု...
မသီတာထွေးအားသတ်ဖြတ်သူ ကုလား ၂ ကောင်အား ကြိုးမိန့်ေ...
မြန်မာပြည်က ဂျာနယ်တွေ -အာဃာတလား၊ racists လား၊
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါကြွက်သားများ အတွက်ေ...
အကြမ်းဖက်မှု၊ ရခိုင် ပဋိပက္ခနဲ့ ပထ၀ီ နိုင်ငံရေး
ရခိုင်ပြည်မှာ အကြမ်းဖက်နိန်ရေ ဘဂ်လီမူဆလင်တိကို လို...
”ဝ” နဲ့ SSA အပြန်အလှန် ပစ်ခက်
အင်္ဂလန်တွင် ဘီဘီစီကို မြန်မာများ ဆန္ဒပြ
ရသေ့တောင်တွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၁၁ဦးအသတ်ခံရ ရန်...
နိုင်ငံပိုင် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုလ်တု လွှတ်တင်တော့မည် မဟု...
အသေးစား ကမ္ဘာမြေလေ့လာရေး ဂြိုလ်တု ဂျပန်လှူမည်
မည်သည့် ဖုန်းဖြင့်မဆို နိုင်ငံတကာသို့ တိုက်ရိုက်ခေ...
မိုဘိုင်းဖုန်းများ အင်တာနက် လျှောက်ထားရန် မလိုဘဲ အ...
သမ္မတကြီး မိန့်ခွန်း ဗွီဒီယို (၁၉-၀၆-၂၀၁၂)
ရခိုင်ပဋိပက္ခများကြောင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် ဗ...
ဆဒုံး၊ ကန်ပိုက်တီးဒေသရှိ ကလေးငယ်ပညာရေးအတွက် ဆရာ/ဆရ...
စွန့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာဘာကိုခေါ်ပါသလဲ------?(ပေးစာ - ၁၅...
KIA အဖွဲ့က ရွာများရှိဆိုင်ကယ်များထံမှ ငွေတောင်းခံခ...
ကျားဖြူပါတီ တည်ထောင်သူ တစ်ဦး ထပ်မံ နုတ်ထွက်
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ၏ နိုင်ငံတော်ဖွ...
ဖမ်းဆီးခံရသူတွေ လွှတ်ပေးဖို့ ကျောက်တော်မှာ ဆန္ဒပြ
စစ်တွေမြို့နယ်အတွင်း ဒုက္ခသည် စခန်းပေါင်း ၆၇ ခုအထိရ...
စက်ရုံအလုပ်သမားများ၏ အနိမ့်ဆုံးယာယီလစာကို ကျပ် ၅၆၇...
Call Center မှ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်နှင့် ဖုန်းလိုင်းအသစ်...
စစ်တွေအခြေပြု ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြေးဆွဲနေသည့် ပြ...
လွှတ်တော်၌ အဆင့်မြင့် အီလက်ထရောနစ် စာကြည့်တိုက် ထူေ...
Bangladesh Cyber Army မှ Myanmar Express Website အ...
တောင်ကုတ်မှ ရခိုင်များကို အလွန်မုန်းတီးကြောင်း ဇာဂ...
မသီတာထွေးအား မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ် သူ ကုလားသုံးဦးအ...
မြန်မာ ယူ-၂၂ ထိုင်းနိုင်ငံကို ထွက်ခွာ
ရိုဟင်ဂျာ ပြည်နယ်ရတော့မည် (ပေးစာ - ၁၅၂)
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်နှ...
"ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ အလှူငွေများ ပေးအပ် ...
"ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် အတွင်းအကြမ်းဖက်သ...
ဟံသာဝတီလေဆိပ်အား ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ခရီးသည် ၁၀ သန်း ...
စင်္ကာပူ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြသော စုကြည် နှင့် ရိုဟင်ဂျ...
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများ၏ စုပေါင်း သဘောထ...
လူထုစိန်ဝင်း၊ အသက် (၇၂) နှစ်
မန္တလေး၌ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး ရုံးခွ...
မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေဖောက်ဖျက်သော ပြိုင်ကားများအား မန္တ...
တရုတ် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး အာကာသ ယာဉ်မှုး ပျ...
ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အွန်လိုင်း ကားပြပွဲ ပြုလုပ်မည်
ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း ဒီဇိုင်း ပညာရပ်များအတွက် ...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဘက်မှုများ...
ရိုဟင်ဂျာ ယူနိုက်တက် FC
NDF ပါတီ ဥက္ကဌ နေရာ အား ဦးခင်မောင်ဆွေ ကို ခန့်အပ်
ရုရှားနှင့် တရုတ်ဦးဆောင်သောအုပ်စုက ဆီးရီးယားတွင် ၀...
စစ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များကို မြောက်ကိုရီးယား ခိုးယူ...
ရန်ကုန်မြို့ တွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ပါက ရဟတ်ယ...
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး ဂရုဏာသက် အာရုံစိုက်စ...
ဗိုင်းရပ်စ် သတိပေးချက် (Breaking News)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာလေကြောင်းက ရန်ကုန်မှ ဟောင်ေ...
အင်တာနက်သုံးသူ မြန်မာယောင်္ကျားလေးများ သတိထားစရာ မိန...
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း (အပိုင်း - ၂)
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း (အပိုင်း - ၁)
မသီတာထွေးအမှု မနက်ဖြန် စီရင်ချက် ချမည်
မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ရထားပို့ဆေ...
မန္တလေး ဘူတာကြီးပေါ်၌ ဟိုတယ်နှင့် ရှောပင်း စင်တာများ...
ကားတင်သွင်းမှုမှာ (ကညန) က အခွန်လျော့ပေးသည့် ကြေညာချ...
အန်တီ ဒေါ်ရွှေဇီးကွက် ဆီသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
.လေးစားရပါသော အန်တီ ..အန်တီဆီသို့ ကီးဘုတ်ပေါ်ကို လေးလံတုန်ရီသော လက်ချောင်းလေးများကို တင်ကာ လေးစား စွာဖြင့် စာရေးလိုက်ပါတယ်..ယောင်နောက်ကို ဆံထုံးပါဆိုသလို ...
From : ..ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န ( မေတ္တာရှင် )
" ချစ်သား ကဿပ -
ဥပမာအားဖြင့် လောက၌ ရွှေတုငွေတု မပေါ်သေးသမျှ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ပြုလုပ်သည့် 'လူ့အခွင့်အရေး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်' ဆုချီးမြှင့်ပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ဆုချီးမြှင့်
ဇွန်လ ၂၀ ရက် ၂၀၁၃
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်သည့် "လူ့အခွင့်အရေး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင် ပွဲတော်" ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဇွန...
တိုင်းရင်း သားပေါင်း စုံ ပါသည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ပွဲ ကျင်း ပပေးနိုင်မှ အပစ် ရပ်ရေး KIO သဘော တူမည်
မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကချင် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်၊ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့်အတူ စကားလက်ဆုံကြနေသော ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး (ဓာတ်ပုံ- မေခ...
EU နိုင်ငံများသို့ သွင်းကုန် တင်ပို့မှု အခွန်ကို သုည ရာခိုင်နှုန်းထိ လျှော့ချ ကောက်ခံရန် ယခုလ အတွင်း ဆုံးဖြတ် အတည် ပြုမည်
[image: EU နိုင်ငံများသို့ သွင်းကုန် တင်ပို့မှု အခွန်ကို သုည ရာခိုင်နှုန်းထိ လျှော့ချ ကောက်ခံရန် ယခုလ အတွင်း ဆုံးဖြတ် အတည် ပြုမည်]
ရန်ကုန် ဇွန် ၁၉
ကျပ်သိန်း ၉၅၀ တန် နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ပညာရေးဌာနသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်း
ငွေကျပ် သိန်း ၉၅၀ ကျော် တန်နှစ်ထပ်ကျောင်း ဆောင်သစ် ပညာရေးဌာနသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်း ပွဲအခမ်းအနားကို ဇွန် ၁၈ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မှော...
သရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုးအမှု အမိန့်ချရန် ဇူလိုင် ၃ ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်း
ဗဟန်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင် အမှုရင် ဆိုင်လျက်ရှိသော ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ မင်းအုပ်စိုးကို ဇွန်လ ၁၉ ရက် နေ့တွင် တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ရန် သတ်မှတ်ထား...
လူသား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကလေးငယ်များ နွားနို့ တိုက်ကျွေး (အယ်ဒီတာ့အာဘော်)
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ကုလသမဂ္ဂက ချမှတ် ထားသော
ထောင်စုနှစ်သစ် ရည်မှန်းချက် များမှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ဆင်းရဲမှု ရာခိုင်နှုန်း ၁၆ ရာခိုင်နှုန်...
ယာ ဣစ္ဆေ ပေါရိသံ နာရီ၊
ဇာတိံ ဇာတိံ ပုနပ္ပုနံ။
အမျိုးသမီးသည် ဘ၀တိုင်း ဘ၀တိုင်း အဖန်တလဲလဲ ယောက်ျားဘ၀ကို ရယူချင်သည်ဆိုပါက သိကြာ...
ပါးအပါအ၀င်သံဃာတော်အပါး ၂၀၀ တို့ စည်းဝေးကြ၍နိုင်ငံတော်...
ဒေါ်စု အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တစ်ခုလုံး ပြုပြင်မယ်ဆိုရင် ရှေ့နောက်မညီတဲ့ ပုဒ်မတစ်ခုချင်းစီကို စပြီး...
1. A letter of Submission ( jpg ) 2. Thesis 3. Personal form ( jpg ) 4. Remarks of the Departments on thesis ( pdf ) ( Signature )